Muwaadin gurigiisa looga haystay Muqdisho oo dib loogu celiyay (SAWIRRO) – AfmoNews
Muwaadin gurigiisa looga haystay Muqdisho oo dib loogu celiyay (SAWIRRO)
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho ayaa maanta in oday ah hoygiisa dib ugu celiyay, ka dib muddo soddon ah oo magaalada looga haystay.
Gurigan oo ku yaala Degmada Kaaraan ayaa waxaa soddonkii sano ee ugu dambeysay deganaa qoys, kuwaa oo sida uu Gudoomiyuhu sheegay degay, ka dib markii qoyskii lahaa ay ku barakaceen dagaalkii sokeeye ee dalka.
Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa sheegay in dadaal badan ay u galeen, sidii muwaadinkaasi hoygiisa loogu soo celin lahaa, ka dib markii uu is faham-waa soo kala dhexgalay isaga iyo qoyskii deganaa.
“Waxaaan maanta halkan u nimid inaan milkile gurigiisa ka maqnaa muddo soddon sano ah ku wareejino. Runtii dadaal la sameeyay ayay ku suurtagashay. Burburka markuu dhacay dhibaato badan ayaa dhacday, oo hanti badan ayaa la kala qaatay, guryo badan ayaa la kala xoogay, dhul bannaan asaga warkiisaba daa.” Ayuu yiri Duqa Muqdisho.
Duqa Muqdisho ayaa yiri “Maamuladii is bedbedelayay wuxuu aad ugu dadaalayay in cid walba waxeydii dib loogu celiyo, tani waa mid ka mid ah dhacdooyinkii soo taxanaa, oo cid walba aan milkiyadeedii dib ugu celineynay. Degmada Kaaraan ayuu ku yaallaa gurigaan, waxaana uu ka maqnaa gacanta milkiilaha, markii burburka dhacay oo laga qaxay qoys Soomaaliyeed ayaa ku noollaa. Qoyskii Soomaalida oo degan ayaa waxaa u soo noqday qoyskii lahaa, maamulka ayay la soo xiriireen mar ay ayaga xoogaa is fahmi waayeen. Maamulka Degmada iyo kan gobolka oo iskaashanaya waxay ku guuleysteen inay milkiilihii ku wareejiyaan maanta gurigiisii, oo hadda aniga aan furihiisii gacanta ku hayo.”
Cumar Filish ayaa shacabka ku nool Magaalada Muqdisho ugu baaqay in cid kastoo haysata hanti aysan lahayn ay dib ugu celiso dadkii lahaa.
Nagala soo xiriir dhacdo@gmail.com
Khayre: Bannaanbixii Sabtida waala carqaladeeyay, dib ayaana loo dhigay
Madaxweynaha Puntland oo gaaray Magaalada Boosaaso (SAWIRRO)
Shabaab oo sheegtay weerarkii jeelka Boosaaso, sheegayna sababta ay u weerareen
Faah faahin: Weerarkii xalay lagu galay jeel weyn ee Boosaaso
Kulankii Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo natiijo la’aan ku soo dhammaaday
Weerar qaraxyo ku bilowday oo caawa lagu qaaday jeelka Boosaaso
Sevilla: Jules Koundé positive for coronavirus
DEG DEG:-MD Farmaajo, Mursal & Rooble Oo Kulan Xasaasi Ah Ku Yeeshay Villa Somalia Iyo Nisa Oo War..
(Sawirro) RW Rooble oo sheegay in Xukuumadiisu ahmiyad gaar ah siinayso dhamaystirka..
Game of Thrones spending just as long making fewer episodes
With 150 million daily active users, Instagram Stories is launching ads
Washington prepares for Donald Trump’s big moment
CS:GO ELeague Major pools and tournament schedule announced
Puntland oo sheegtay in dagaal ka dhacay G/ Bari lagu dilay xubno ka tirsan Al-shabaab – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Maxaa ka soo kordhay qaraxa caawa ka dhacay Muqdisho – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka (05=03=2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Afmo News www.afmonews.com is an independent Somali News site owned by Somali World News. Established in 2020 by Somali journalist, Afmo News is the World News site as of April 2020. Afmo News covers all the latest headlines in Somali news, politics and society.
© 2020 AfmNews is an independent Somali News site owned by Somali World News.